Ogandà: Ny Fomba Nampiasan’ny RootIO Ny Siny Hanjary Fampielezampeo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Mey 2018 7:09 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, 日本語, Français, English
Tetikasa iray an'ny Wits Journalism sy ny Tshimologong Digital Innovation Precinct iarahan'izy ireo miasa amin'ny fikambanana Mpanao Gazety Momba ny Zon'Olombelona ao amin'ny Anjerimanontolo Ryerson no resahan'ity lahatsoratra nosoratan'i Tshepo Tshabalala avy ao amin'ny “Laboratoire de Journalisme et Médias (jamlab.africa)” ity. Nahazoana alàlana ny famerenana mamoaka azy etoana. Azo vakiana ato ny lahatsoratra niaingàna.
Ao Ogandà, niteraka fiforonana boatim-pitaovana manana loharano misokatra matanjaka sy mora vidy ahafahan'ny vondrom-piarahamonina mamorona ny foiben'onjampeo kely ho azy ireo manokana ny fampitambarana ny tanjaky ny fampielezampeo sy ny teknolojia vaovaon'ny finday ary ny aterineto. Ny zavatra rehetra ilaina amin'ìzany dia finday avo lenta iray sy fanapariahana feo tsy dia lafo loatra, ary vondrom-piarahamonina hizaràna, hampiroboroboana ary hiaraka hiasa amin'ny famokarana votoaty mavitrika.
Ny antsoiny hoe fifandraisana/fifaneraseran'ny vondrom-piarahamonina no asa ifotoran'ny tetikasa RootIO. Chris Csikszentmihalyi, mpiara-nanangana azy, dia milaza fa hevitra teraka taorian'ilay horohorontany tany Haiti tamin'ny 2010 [fr] no niaingàna, rehefa havadik'ireo foiben'onjampeo FM ny fandaharan-dry zareo mahazatra ho lasa fandaharana momba ny fomba atao hanampiana ireo sisampaty tamin'ilay horohorontany mba hahazoana fanampiana na rano. Teo amin'ny herintaona sy tapany taty aoriana, niasa ho an'ny Tahirin'ny Firenena Mikambana Misahana ny Ankizy [fr] (UNICEF) tao Ogandà i Csikszentmihalyi, tao anatin'ny fandaharanasa iray momba ny fanabeazana. Nahagaga azy ny fomba nampiasàn'ireo Ogandey ny finday – tsy dia ho an'ny antso loatra.
Fony izy mbola tao amin'ny UNICEF, nihaona tamin'i Jude Mukundane, izay niasa tamin'izany fotoana izany ho an'ny Uganda Telecom, nanampy azy hametraka ny firaketana fahaterahana amin'ny alàlan'ny finday, ho an'ny governemanta ogandey, fiarahamisa tamin'io sampana io ihany. Nahavitra zavatra mahaliana tamin'ny finday i Mukundane, tamin'ny fampiasàna ny Tolotra fanampiny fandefasana angona tsy misy lamina (USSD). “Nandramako ny nandray azy ho mpiasa … ary herintaona teo ho eo taorian'izay, vonona ny hanao zavatra izy”, hoy i Csikszentmihalyi.
Ahoana no fandehany ? Ireo mpampiasa dia afaka mividy ny ankamaroan'ny zavatra rehetra ilaina eny an-tsena ao an-toerana. Araikitra ao anaty siny iray matevina nasiana tangolimihodina (ventilo) ny fitaovana kely iray fanapariahana feo, asiana mpifehy ny fahana sy smartphone iray mifandray aminà tandroka sy takelaka fahanan'ny masoandro.
“Miantso ilay fampielezampeo sy ilay mpanentana fandaharana ny solosaina ato aminay … Mamaly tsy baikoana ny telefaona ao amin'ilay foibe fampielezampeo rehefa tonga ny ora fandefasana fandaharana. Miantso ireo mpihaino te-handray anjara amin'ny resadresaka ao anaty fandaharana, saingy mahita fa hoe mbola miasa ny ao, avy eo mamerina miantso azy ireo ny solosaina. Araka izany, tsy misy vola aloan'ny olona, hoy i Csikszentmihalyi.
Csikszentmihalyi manampy hoe tena manao izay azony atao mihitsy izy mitàntana ny RootIO. Na ireo rindrambaiko ampiasainy aza dia ireny maimaimpoana ireny ary mampiasa ny loharano misokatra ao amin'ny GitHub sady na iza na iza dia afaka mitroka ho ao anaty findainy sy mampiasa ilay fampiàsa avokoa.